Collabora iri kuvandudza nharaunda yekumhanyisa Android kunyorera paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Collabora iri kuvandudza nharaunda yekumhanyisa Android kunyorera paLinux
Shandira pamwe neimwe yeanonyanya kuzivikanwa open source consultancies, Kudzidziswa uye zvigadzirwa kumakambani, munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti iri kuvandudza chirongwa chitsva chakavhurwa sosi ayo anotarisa zvakanyanya kugadzira nharaunda yakasarudzika yekumisikidza maapplication eApple, ichipa kusangana kweiyo application data interface ine graphical shells zvichibva Wayland.
Zita rechirongwa ichi "SPURV"nerubatsiro rweSURV, mushandisi anogona kumhanya Android kunyorera paLinux pamwe neyakajairika graphical application yakapihwa muLinux distributions
Kuti uwane izvi, nharaunda ye Android inomhanya mune yakasarudzika mudziyo. Mune zvakatipoteredza, zvakajairika zvikamu zveiyo Android chikuva zvakaiswa, zvinopihwa muAOSP (Android Open Source Project) zvinyorwa.
1 Nezve SPURV
1.1 Sravana Sameeralu Serial XNUMXt Audio
1.2 SPURV HWComposer
1.3 SPURV DHCP
2 Edza SPURV?
SPURV zviri zvakawanda zveunganidzwa wematurusi anogona kushandiswa kumisikidza Android mudziyo, gadza Android maapplication mukati mayo uye wozomhanya iwo maapplication akazara skrini pane Wayland Linux desktop pamusoro peLinux kernel.
Kuti umhanye mudziyo, shandisa systemd-nspawn. YeAppleapps, yakazara 3D yekumhanyisa rutsigiro inopihwa uye kuti izvi zvishande Linux desktop inofanirwa kunge iri kushandisa iyo Wayland kuratidza server.
SPURV inoshandisa zvimwe zvezvinhu kuti zvibudirire kudyidzana kwesystem neiyo Android mudziyo.
Sezvo SPURV yeApple inoita seyakafananidzwa Android chishandiso uye inochinjisa iyo Android kuvaka kune zvatinoda.
Kune zvimwe zvinoshanda zvikamu zveSURV:
Gonesa odhiyo zambuko kubva Android kuenda PulseAudio.
Inotendera grafiki bhiriji kubva Android kuenda Wayland
Izvi zvinhu zvinotevera:
Sravana Sameeralu Serial XNUMXt Audio
Este inoshandiswa kuronga odhiyo kuburitsa kuburikidza neLinux odhiyo stack. Icho chinhu chinoitwa muchimiro cheyadhi inoendesa kumberi kune iyo Android Audio HAL (Hardware Extraction Layer) kune ALSA subsystem.
Is inoitirwa kusanganisa Android application windows munzvimbo yeWayland-based. Chinhu ichocho chinja zvikumbiro kuHWC API (Hardware Composer) pane kufona kuWayland.
SPURV HWComposer inopa maturusi ekuratidzira data pachiratidziri, gadzira zvidzitiro zvechiso uye sanganisa mabhaisikopo kubva kune akasiyana maficha pane imwechete desktop. Iyo protocol inoshandiswa muHWC zvine hungwaru yakafanana neWayland protocol, saka dudziro haina kukonzera matambudziko.
Pamusoro pekushandurira iyo API kubva kuHWC kuenda kuWayland, iyo SPURV HWComposer chikamu chinobatawo kugadzirisa kuiswa, kutora, kudivi reWayland, zviitiko zvine chekuita neAroid, senge ruzivo rwegirazi rekubata, uye kutsiva kwavo muApple.
Izvi ndizvo kuiswa kuri nyore kweiyo DHCP protocol, iyo inogonesa network kubatana pakati peiyo huru sisitimu uye Android nharaunda.
Nezvo, vagadziri veCollabora vanopokana kuti chirongwa ichi chine zvakanaka pamwe nezvisina kunaka zvikamu:
Nzira iyo SPURV inoitwa nayo inoreva kuti yakazara inoshanda sisitimu iri kumhanya mumudziyo, iyo ine zvese zvakanaka nezvakaipa mhedzisiro.
Imwe yemhedzisiro mhedzisiro yakakura kupatsanurwa kweapplication Android, zvinoreva kuchengetedzeka kukuru uye kuvanzika kweanogona kunge asina kuvimbika kunyorera.
Izvo zvakashata zvine chekuita nekuwanika uye kuita kwehardware. Kwese kuwana kwehardware iyo Android inoda inofanira kupfuudzwa kune mudziyo.
Pamusoro pekufanirwa kugadzirisa manyore systemd-nspawn kuwana, kune zvekare mutengo wekuita unobatana nekumhanyisa mudziyo.
SPURV iri mukutanga kwayo, saka kuchine zvakawanda zvekukwiza, asi izvi hazvireve kuti isu tinogona kuita bvunzo uye nekuziva kugona uko chirongwa ichi chingatipa.
Kuti Kana iwe uchifarira, unogona kutarisa kupindira kwayo kuti iite kusangana zvese kubva kunobva (Gitlab).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Collabora iri kuvandudza nharaunda yekumhanyisa Android kunyorera paLinux
Linux Mint 19.2 ichanzi Tina, zvichibva paUbuntu 18.04 LTS
Kutsvaga wekuverenga Chirungu? ispell inowanikwa kubva kuTerminal.